Waatee Kooxda Labaad Ee Sumacadii Iyo Sharaftii Kooxda Liverpool Dhulka La Dhacda Ee Man City Soo Raacda? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Manchester United ayaa noqotay kooxdii labaad ee dhulka la dhacda sharafta iyo sumcadda kooxda Liverpool maalmo kaddib markii ay kooxda hoggaanka horyaalka Premier League haysaa shaacisay go’aan ay dadku dhibsadeen oo ay ku dhintay mushaharka shaqaalaheeda.
Manchester City ayaa war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ku bahdishay Liverpool, waxaanay si cad u sheegtay in shaqaalaheedu ay heli doonaan mushaharkooda oo dhan waqtigan adag ee caabuqa Coronavirus uu sababay in hakad la geliyo ciyaaraha, ilihii dakhliga naadiyada oo dhanna la xidhay.
Arrintan oo ceeb ku noqotay Liverpool oo 80 boqolkiiba mushaharkooda ka goysay shaqaalaha aan muhiimka ahayn, ayaa waxa iyaduna intii hadhsanayd ee sumcadda Reds dhulka kusii jiidday.
Sida ay qoreen warbaahinta Ingiriisku, Manchester United waxay qabtaa walaac dhaqaale, laakiin qorshaheeda muddada gaaban iyo midka dheerba kuma jirto inay dawladda culus saarto, isla markaana shaqaalaheeda ay mushaharka ka dhinto.
Guddoomiye ku-xigeenka Manchester United ee Ed Woodward iyo mulkiileyaasha reer Glazers, ayaa waxay sii wadi doonaan inay si buuxda shaqaalaha u siiyaan mushaharkooda, iyadoo ay horena u qaadeen laba tallaabo oo ay ku heleen taageero weyn oo ahaa inay u celiyaan jamaahiirtooda lacagtii tigidhada kulankii Europa League ee albaabada loo xidhay LASK ay ku burbuiyeen, taas oo dhamayd £245,000 Gini. Isla bishii March, United waxay si joogto ah u bixinaysay shaqalaheeda aan joogtada ahayn ee sida yowmiyaha u shaqayn jiray oo ay gunnadooda siinaysay xataa iyaga oo aan shaqaale rasmi ah ahayn, isla markaana shaqadii ay qaban lahaayeen ay xidhan tahay.
Mushaharka shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee ciyaartoyguna aanay ku jirin, waxa United ku kici doonaa ilaa £1 milyan oo Gini, waxase go’aankoodu yahay inay bixiyaan dhamaantood.
Go’aanka United ayaa waxa uu ceeb ku yahay Liverpool oo 80% mushaharkii ka goysay shaqaalaheeda, laakiin waxayadana kasii horreeyey Tottenham iyo Newcastle oo si buuxda shaqada uga joojiyey shaqaalahan, wax mushahar ahna aan gebi ahaanba siin doonin.
Reds oo sumcaddii uu 18-ka bilood soo dhigasayay Jurgen Klopp ay dhulka kaga dhacday markii ay go’aankan gaadhay ayaa waxa baraha bulshada iyo warbaahintaba looga jeediyey canaan badan.